Madaxweynihii hore ee ismaamulka Cafarta oo isku dhiibay TPLF iyo wararkii ugu dambeeyay ee Itoobiya
Thursday October 14, 2021 - 13:27:37
Maleeshiyaadka qowmiyadda Tigreega ee TOL ayaa markale olole dagaal ka bilaabay gobol dhaca waqooyiga dalka Itoobiya.
ismaamulka cafarta dagaallo culus ayaa dib uga bilaawday kadib 30 maalmood oo xabad joojin aan caga badan ku taagnayn ay ka jirtay mandiqadda.
Wararka ka imaanaya itoobiya ayaa sheegaya in dagaalo culus ay shalay ka bilaawdeen dhowr magaalo oo katirsan cafarta halkaas oo maleeshiyaadka Tigreega ee TPLF ay soo gaareen bishii Agoosto ee lasoo dhaafay.
ilo wareedyo ayaa usheegay wakaaladda wararka Faransiiska in dagaallada ugu culus ay ka socdaan degmada Awra ee katirsan mandiqadda fante ee ismaamulka cafarta, mas'uuliyiin katirsan falaagada Tigreega iyo xukuumadda itoobiya ayaa labaduba xaqiijiyay in dagaalladu ay halkaas dib uga bilaawdeen.
Dhinaca kale mas'uul horay uga tirsanaa ismaamulka Cafarta ayaa isku dhiibay fallaagada qowmiyadda Tigreega, Haji Seyoum oo horay usoo noqday madaxweynaha ismaamulka Cafarta ayaa ku biiray TPLF.
Warbaahinta Tigreega ayaa sheegtay in Haji Seyoum uu si iskiis ah ugu biiray ciidamada Tigreega ee dagaalka uga jira deegaanno katirsan Cafarta, tallaabadan ayaa dhabar jab ku ah xukuumadda Abiy Axmed ee dadaalka ugu jirta sidii ay unaafayn laheyd fallaagada mucaaradka ah.
'Q.Midoobay' oo ka digtay in ay kala furfurmaan qowmiyadaha dega dalka Itoobiya.
Kooxda TPLF oo laga qabsaday magaalada Lalibela iyo Warar kale.
Muslimiin Sacboolay ah oo isku dayay in ay gaadiid gaashaaman ka qabsadaan ciidamada Faransiiska [Sawirro].
Al Shabaab oo weeraray Madaxtooyada Koonfur Galbeed iyo saldhigga ciidanka Itoobiya ee Baydhabo.